Security Archives - Glory Assumption Space
Day Security ( နေ့ လုံခြုံရေး ) - ကျား - ( ၅ ) ဦး
###### URGENT REQUIREMENT ###### GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ ချက်ချင်း အင်တာဗျူးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၂) Day Security ( နေ့ လုံခြုံရေး ) - ကျား - ( ၅ ) ဦး / လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် / မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ - အသက် ( ၃၅ ) နှစ်အောက် ဖြစ်ရပါမည်။ - လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူကိုဦးစားပေးပါမည်။ - လုံခြုံရေးတာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ရိုးသားကြိုးစား၍အရက်သေစာအသောက်အစားကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရပါမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တအထူးကောင်းမွန်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါ တည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။
Security (လုံခြုံရေး ) – Male (5)Posts/လစာ- ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောတောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
1. Security (လုံခြုံရေး ) – Male (5)Posts/လစာ- ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) /တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။
- အသက် ၅၀ အထိလျှောက်ထားနိုင်သည်။
Security – Male (5)Posts/လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Electronic Showroom တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Security – Male (5)Posts/လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်/မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
- အထက်တန်းအောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၃၀ မှ ၅၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - လုံခြုံရေးဖြင့်လုပ်သက် အနည်းဆုံး ၆ လရှိရမည်။ - မရမ်းကုန်းအနီးနေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။
လုံခြုံရေး - ကျား ( ၅ ) ယောက်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ရေသန့်စက်ရုံ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 5. လုံခြုံရေး - ကျား ( ၅ ) ယောက် / လစာ - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် / ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် - အထက်တန်းအောင်မြင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။ - အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ် ရှိရမည်။ - စက်ရုံအတွင်း ဧည့်သည်အဝင်အထွက်များ ၊ ဝန်ထမ်း အဝင်အထွက်များ၊ကုန်ပစ္စည်းကား များ အဝင်အထွက် စာရင်းများပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ - အသက် (၃၅) နှစ် (၅၀) နှစ်ကြားရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ပိတ်ရက်မရှိပါ၊ (ပိတ်ရက်တစ်ရက်=ငါးထောင်ကျပ်ပေးမည်။) - နေ့ /ည အလှည့်ကျ ဆင်းနိုင်ရမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- mdygasrecruit.hr2@gmail.com , mdygasrecruit.hr3@gmail.com Phone Number - 09750108882 , 09750108883 , 09750108884 Viber Phone Number – 09750108882 , 09750108883 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် D4 ၊ သီရိရိပ်သာ ( ၂ ) ၊ ၆၅ လမ်း ၊ ၃၃ လမ်း x ၃၄ လမ်းကြား ၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့ ။
Day Security (နေ့လုံခြုံရေး )– Male (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Gems & Jewellery Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Day Security (နေ့လုံခြုံရေး )– Male (5)Posts /လစာ - ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် /မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
- အသက် (၃၅)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ - လုံခြုံရေးတာဝန်ကို ကျေ ပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ရိုးသားကြိုးစား၍ အရက်သေစာအသောက်အစားကင်းရှင်းသူဖြစ်ရပါမည်။ - အကျင်းစာရိတ္တအထူးကောင်းမွန်ရမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Security – Male (5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
1. Security – Male (5)Posts /လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် /လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
- ပညာအရည်အချင်း အလယ်တန်းအဆင့်
- ည (၈)နာရီမှ မနက် (၆)နာရီအထိ
E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com
Security - Male (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မြောက်ဥက္ကလာ မြို့နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။ 2. Security – Male (5) Posts / လစာ - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ်(အထက်) / မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်။ • ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်အနည်းဆုံးရှိသူဖြစ်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက်၉နာရီ မှ ည ၉ နာရီထိ တစ်ဆိုင်း၊ည၉နာရီ မှ မနက်၉နာရီအထိတစ်ဆိုင်းဆင်းနိုင်ရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိုနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail-gasrecruit.cv@gmail.com,gasrecruit.hr5@gmail.com/, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone Number - 09- 262223783 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09262223783,09263121101, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဂိုထောင် တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချ က်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Security – Male (5)Posts /လစာ - ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် /လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
- အလယ်တန်းအောင်ဖြစ်ရမည်။ - ဂိုထောင်အ၀င်အထွက်စာရင်းများကိုလုပ်နိုင်ရမည်။ - အသက် ၃၅ မှ ၄၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - နေစရာစီစဉ်ပေးပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အလုံ မြို့ နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.လုံခြုံရေး - Male (5) Posts/လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ကျပ်/အလုံမြို့နယ်။
ဂိုထောင်လူ အ၀င်၊အထွက် စာရင်းလုပ်ပေးနိုင်ရမည်။
အသက် ၃၅ နှစ်မှ ၄၀ နှစ်အတွင်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com / gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09262223783,09263121101, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Security – Male/Female - (10) Posts
URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဆေး Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
Security – Male/Female - (10) Posts / လစာ - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ • အသက် ၅၀ အောက်ဖြစ်ရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်ရမည်။ • ၃၅ လမ်း၊ဗိုလ်ကလေးဈေး၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊သာကေတ၊တောင်ဒဂုံ မြို့နယ်များတွင် အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • နေ့ဆိုင်း၊ညဆိုင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • ဆေး Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09262223783, 09263121101 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အထပ်သား Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
1. Security – Male (5)Posts /လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် /လှိုင်မြို့နယ်။
- အသက် (၃၅) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မန္တလေးမြို့ နယ်ရှိ Manufacturing Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Security – Male (5) Posts/လစာ - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ်(အထက်)/မန္တလေးမြို့ နယ်။ • အခြေခံပညာ အလယ်တန်း (သို့ ) အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ • အသက် ၄၀ မှ ၅၀ နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိအလုပ်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • မန္တလေးမြို့နယ်ခံဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ Advertising Company တစ်ခုတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1	Security – Male (5) Posts / လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ကျပ် / လမ်းမတော်မြို့နယ်။ •	အလုပ်ချိန် မနက် ၇နာရီ မှ ည ၇နာရီထိ (ကြားထဲတွင် နားချိန် ၄နာရီ နားရမည်) •	လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံမလို။ •	အသက် ၂၀ နှစ် အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Security - Male (5)Posts
Salary Rang : 85000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ဒိုတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Security – Male (5)Posts /လစာ - ၈၅,၀၀၀ ကျပ်+နေစားစရိတ်ငြိမ်း /ကမာရွတ်မြို့နယ်။ - လစာ ၈၅,၀၀၀ + နေစားစရိတ်ငြိမ်းအပြီး။ - အသက် ၄၀ ၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - အသောက်အစားကင်း၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - ပြည်လမ်းနှင့်အင်းယားလမ်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ - အခန်းအလွတ်တွင်နေထိုင်ရန် သက်သက်သာသာဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ –ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Security- Male (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Security – Male (5)Posts /လစာ- ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/လှိုင်မြို့နယ်။ - အထက်တန်းအောင်ဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - ကွမ်း၊ဆေးလိပ်မသောက် သူဖြစ်ရမည်။ - လုံခြုံရေးပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )